कि जागिर छोड्, कि मलाई ! :: Setopati
कमला अधिकारी असोज २९
'कि मलाई छोड् कि जागिर छोड्। तेरो मनपरीले चल्दै अब। मलाई तेरो सबै व्यवहार थाहा छ,' श्रीमानको यो अमिलो वचन रियाको मनमा एसिड बनेर भतभती पोलिरहेको थियो। त्यो तीखो वचन प्रहारको जवाफमा खर्चने शब्द ऊसँग थिएन।
'मेरो जिन्दगीको लक्ष्य पूरा गर्न म कमजोर बन्नु हुँदैन। आँसुमै चिप्लिरह्यो भने मान्छे कहिल्यै उकालो लाग्न सक्दैन,' यस्तै सोचेर कोठाको कुनामा राखेको रातो झोला बोकेर बाहिर निस्की।
निधारमा टीका लगाइँदिदै आमाले भनिन्, 'ल नानी ! भाइ सानो छ, हामी डाडाँमाथिका घाम भइसकेम्। घरको जेठोबाठो तैं होस्। धेरै आश त लाम्दैन तै पनि पढेर सबैको पियारो बन्नू। आजभोलि त रेडियाँ नि कस्ता–कस्ता सम्चार आम्छन्। बलात्कार, एसिड छ्यापे अरे, के क्या हुन् के क्या हुन् सुन्न पर्नि नि ! सहराँ मुन्छे अलि निर्दयी हुन्छन् भन्छन्। आफ्नो ख्याल राख्नू, यी सप्पै कालबाट आफूलाई बचाउनू।'
गाउँकी जुना दिदी 'ल जाऊँ गाडी आइसक्यो' भन्दै आइन्। गाडी चढ्ने बेला रियाका बुवाले आफ्नो आसकोटबाट पानी कागजभित्र बेरेर राखेको पैसा झिकेर हातमा थमाउँदै भने 'ल छोरी ! राम्रोसँग पढेस्। दुःख अप्ठेरो पर्दा जुना दिदीलाई पनि भन्नू।'
'चोया केका लागि काढ्दै हुनुहुन्छ दाइ?'
'ए पाते बाबु। ल यता बस्नु न। डोको बुनूँ की भनेर!'
'खै रियालाई देख्दिन त। कता गइन्। मीठो चिया खान मुन लाग्यो क्या तिनको हातले बनाको।'
'रिया त कलेज पढ्न सहरतिर गाकी, जागिर पनि छ। फुर्सदै छैन त्यसलाई।'
'ए राम्रो भो। रियालाई दिने कुरो छैन?'
'बढेकी छोरी, राम्रो कुलघरानको असल केटो पाए दिऊँ भन्ने सोचेको छु।'
'ए लु, त्यसो भए मेरो भाञ्जालाई कुरा पक्का गर्नुपर्‍यो। कोरिया गएर भर्खरै आएका छन्। कमाइ राम्रो छ। सहरतिरै घडेरी लिएका छन्। अर्को छुट्टि आएपछि घर पनि बन्ने। एकपटक छोरीलाई सोधेर निधो गर्नुपर्‍यो।'
'बोर्डिङको जागिर छोडिदेऊ। म तिमीलाई चाहिने पैसा पुर्‍याउँछु। घरमै बसेर लोकसेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग जेको तयारी गर्न मन छ गर' सुधिरले रियालाई भन्छ।
एकदिन फोनमा भन्छ, 'दाइ भाउजूलाई फोन दिनु न।'
'बाबु सञ्चै हुनुन्छ?'
'हजुर भाउजू। आजभोलि खासै कुरा हुँदैन। कतै मबाट गल्ती भयो कि?'
'कति मैले मात्र दुःख गर्नु। आफ्नी श्रीमतीलाई पनि गाउँ ल्याएर राख्नु नि। पहिले त बिदामा घर आउँथी। आजभोलि त्यो पनि बन्द भो। फोन पनि आउँदैन। खै म त गतिलो पारा देख्दिनँ। घरबार बिग्रेला फेरि, बेलैमा सोच्नुस् है बाबु। उमेर पुगेकी अराले बराले छ।'
'माझघरे साइँलो बुवाको कान्छी बुहारी पनि सहर बसेकी थिई। खै पार्लर खोलेर बसेकी रे! छोरै छोडेर पोइला गइछ। सहराँ बस्या मान्छेको के भर हुन्छ र! अहिले त फेसबुकले मान्छेलाई कतिसम्म बिगारेको छ। हजुरले नि थाहा पाउनु भा होला केरे। मैले भनिराख्न पर्दैन,' अब भने भाउजू देवरको कान भर्न थालिन्।
'हेल्लो सुधिर, मेरो नाम निस्कियो नि,' निकै उत्साहित हुँदै रियाले सुनाई।
'जे भए पनि सरकारी जागिर हो, छोड्नु हुँदैन। जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि निरन्तरता दिन्छु' भन्ने अठोटका साथ जागिरमा हाजिर भई। जेठानीलाई निकै रिस उठेको थियो।
तर सुधिर अचानक गर्जिन्छ र भन्छ, 'घर आउन मन लागेछ छ त धन्न ! पढेलेखेकी मान्छे, अब त मेरो साथ तिमीलाई नसुहाउला। यसैले त दाइभाउजू र मलाई दुश्मन ठानेकी छौ। म विदेश गएको यतिका समयसम्म घरमा एक कौडीको सहयोग छैन।'
'पर्दैन जागिर खान। तँलाई पुग्ने सम्पत्ति जोडिदिन्छु। अब तेरो विचार, मलाई रोज्ने वा तेरो जागिरलाई,' रियाले पृथ्वी नैं उल्टो भएको महसुस गरी।
रियालाई पतिको माया थियो। जागिर उसको स्वाभिमान थियो। ऊ कुनै पनि गुमाउन चाहन्थिन। तै पनि उसले सम्बन्धको सार बुझ्दै श्रीमानको हात समाउँदै भन्छे, 'यदि तपाईं मैले जागिर छोड्दा खुसी हुनुहुन्छ भने म राजी छु। म अब तपाईंसँगै घरमा बसेर उकाली ओराली गर्छु।'
'सँगै बस्न सक्दिनँ। म त अब छुट्टिएर बस्छु,' भाउजूले भन्छिन्।
'यदि साँच्चै चरित्रहीन हुँदी हो त त्यस्तो संघर्षपछि पाएको जागिर कसरी सजिलै छोड्थी र ! मलाई माया नगर्दी हो त यति सीमित कमाइमा आफ्ना रहर मारेर किन मुस्कुराउँथी?' उसलाई यही चिन्ताले सताउन थाल्छ।
रियाले दराज खोलेर चेक दिँदै भन्छे, 'के सोच्नु भा नि ! यी यो चेक लिनु ! तपाईंले मलाई विदेश रहँदा पकेट खर्च पठाउनुभएको पैसा जम्मा गरेर राखेकी थिएँ। दुई लाख रहेछ। जानु लिएर आउनु।'
'मलाई माफ गर। तिमीजस्ती देवीमाथि मैले अनेक लाञ्छना लगाएँ। त्यस्तो जागिर छुटाएँ। बरु तिमीले मलाई छाडेर जागिर बचाउनुपर्थ्यो।'
रिया मुसुक्क हाँस्दै भन्छे, 'मैले न त तपाईंलाई छोड्न सक्छु न जागिर। तपाईंले काठमाडौं लिन बोलाउँदा म आउन सकिनँ किनकी म बेतलबी बिदा स्वीकृत गर्न त्यो बिकट गाउँमा निकै धाएकी थिएँ। बिदा स्वीकृत हुन झण्डै एक हप्ता लाग्यो। दुई वर्षको बेतलबी बिदा लिएको छु। तपाईं सँगै बस्न, सन्तान होलान्, हुर्काउन भनेर। मैले जे सोचेर आएँ त्यो पूरा भएको छ।'
रियाले फेरि सोधी, 'अब तपाईं भन्नु म कहाँनेर गलत भएँ। जागिर छोडौं कि नछोडौं?'